ခြေရာကောက်အမိန့် - yan Hou တန်ဘလော့
ဘလော့ Store က
ယူအက်စ်အေ Store က
တရုတ် Store က
ဂျပန် Store က
ဂျာမဏီ Store က
ရုရှားနိုင်ငံ Store က
yan Hou တန် – tracker ဝန်ဆောင်မှု >>>
ကိုယ့်လယ်ပြင်၌အရေအတွက်အားခြေရာခံအတွက်ဖြည့်ပါ, "TRACK" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ကျော်ကိုထောကျပံ့ 300 စာပို့လုလင်မေးမြန်းမှုနှင့်အလိုအလျောက် detect.
ကျော်ကိုထောကျပံ့ 70 ဘာသာစကားများ, စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet အသုံးပြုမှု.
အဆိုပါစာမျက်နှာကိုကျော်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ3မိနစ်, သုံး reflash ကျေးဇူးပြုပြီး.
စံဝန်ဆောင်မှု: 7-15ရက်ပေါင်း ; လေ့လာရေးခရီးဝန်ဆောင်မှု 2-7 ရက်ပေါင်း
စံဝန်ဆောင်မှု: 1~7ရက် ; လေ့လာရေးခရီးဝန်ဆောင်မှု 1 ~2ရက်
ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သားစနစ်ကို non-upload, သည်အခြားနံပါတ်သို့မဟုတ် system ကိုရောထွေးဖို့ forward.
ဘယ်အချိန်မှာအခြေအနေကို Keep "IN TRANSIT" အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ကို item တယ်ဘယ်တော့မှ:
အဆိုပါပစ္စည်းသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး post-ရုံးရန်သင့်ဒေသခံအပေါ်ကိုအပ်ထားပြီး, သို့မဟုတ်သင့်မေးလ် box ထဲမှာတစ်ဦးအသိပေးစာလက်မှတ်လည်းမရှိ ; ဒီတစ်ခါလည်းလည်းအကောက်ခွန်အတွက်ကိုင်, စစ်ဆေးမှုများမှတောင်းဆိုစိတ်တော်.
ဘလော့ & ထောက်ပံ့
ဒီ post ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမ tags များ.
categories Category: Select လုပ်ပါ ဘလော့ Store က ကော်ဖီဘလော့ အသီးဘလော့ ရေစာအစားအသောက်ဘလော့ လက်ဖက်ရည်ဘလော့ Black ကလက်ဖက်ရည် ပန်းပွင့်လက်ဖက်ရည် အသီးလက်ဖက်ရည် လက်ဖက်စိမ်း Oolong Tea White ကလက်ဖက်ရည် လက်ဖက်ရည်သတ်မှတ်ပေးသည်ဘလော့ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း အမေဇုံပရိုမိုးရှင်း eBay ကိုပရိုမိုးရှင်း တရားဝင်ပရိုမိုးရှင်း ထောက်ပံ့ အကျိုး ဘီယာအရက်ချက် ထုတ်ပြန်သည် လက်ဖက်ရည်ဖလား
ထိုင်ဝမ် Lishan လက်ဖက်ရည်၏ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုထင်ရှားသည်
ထိုင်ဝမ်၏ကျော်ကြားသောလက်ဖက်ရည် ၁၀ ခုနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအရသာရှိသည်
လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည်သောက်သောခွက်ကို Jianzhan တရုတ်လက်ဖက်ရည် yanhoutang ဆုကြေးဇူးကို detox ထိုင်ဝမ်လက်ဖက်ရည် oolong လက်ဖက်ရည် လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးခြင်း ပရိုမိုးရှင်း puerh လက်ဖက်ရည် လက်ဖက်ရည်မသောက်ရ eBay အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် လက်ဖက်ရည်အကြိုးခံစားခှငျ့ အသက်လက်ဖက်ရည် ပန်းပွင့်လက်ဖက်ရည် ဘီယာအရက်ချက်လက်ဖက်ရည် အဖြူရောင်လက်ဖက်ရည်
မူပိုင် © 2021 | အားဖြင့် WordPress ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ MH Themes